Web ကို domain name ကိုတော်လှန်ရေးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ရေးထိမှန်နိုင် - သတင်း Rule
သိပ္ပံ & နည်းပညာ
ကွန်ပျူတာ & အင်တာနက်ကို
laptop များ & computing
နေအိမ် & ဥယျာဉ်တော်
Web ကို domain name ကိုတော်လှန်ရေးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ရေးထိမှန်နိုင်
Domain Name Extensions (ဓာတ်ပုံအကြွေး: အဆိုပါ Booklight)
အင်တာနက်ကိုဒိုမိန်းနာမည်များ၏ဒြပ်ထုချဲ့ထွင်ဆိုက်ဘာစပေ့အတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏ကိုထောက်မဘို့ဖျက်ဆီးစေနိုင်ကြောင်း, ထို တစ်ဦးရဲ့ ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ ကိုယ်ခန္ဓာတနင်္လာနေ့ကသတိပေးခဲ့သည်.
“ကျနော်တို့သွားသောဤထူးခြားသောချဲ့ထွင်ရှိ,” Francis က Gurry ကပြောပါတယ်, ကမ္ဘာ့ဖလား Intellectual Property Organization မှအကြီးအကဲ (WIPO), သော cybersquatting ဆန့်ကျင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကြီးကြပ်.
“ဒါကတစ်ဦးထိခိုက်မှုရှိသည်ဖို့သွား, သိသာဖြစ်ဖွယ်ရှိသော, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်မှုအပေါ်. သက်ရောက်မှုများအတိအကျသဘာဝ, ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာသေချာမသိကြ, ဒါပေမယ့်သိသာနှင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်,” Gurry သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်.
“ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်တွေကဒီချဲ့ထွင်အမှတ်တံဆိပ်စနစ်များအပေါ်ရှိသည်လိမ့်မယ်သောသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိုးရိမ်နေကြ,” သူကဆက်ပြောသည်.
ဝေးထိုကဲ့သို့သော .com အဖြစ်ဂန္ထက်ကျော်လွန်သွားသောဒိုမိန်းအမည်များကိုမှအင်တာနက်ကိုဖွင့်လှစ်, .org, .ပိုက်, .gov, နှင့် .edu အမေရိကန်အခြေပြုသဖြင့်အရေးထားပြီး web ကို overlords Assigned အမည်များနှင့်နံပါတ်များသည်အအင်တာနက်ကိုကော်ပိုရေးရှင်းက (ICANN) ထိုသို့ဖန်တီးခဲ့ကတည်းက Web ကိုအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုအဖြစ်.
ရှည်လျားမယ့်ရှိခဲ့သည် 22 ယေဘုယျထိပ်တန်း-level domain (gTLDs), .com နှင့် .net ခြင်္သေ့ရဲ့ရှယ်ယာပါဝင်ရာ.
သို့သော်ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် ICANN ကိုအင်တာနက်များ၏ snowballing ကြောင်းသိရသည် — ကမ္ဘာတဝှမ်းအချို့သောနှစ်ဘီလီယံအသုံးပြုသူများနှင့်, အာရှတိုက်မှာသူတို့ကို၏ထက်ဝက် — အသစ်အမည်များကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစေသည်.
ပတ်ပတ်လည် 1,400 အသစ် gTLDs တဖြည်းဖြည်းသိမ်းဆည်းမှုများကိုတရားဝင်တက်သည်ထားလျက်ရှိသည်, ပထမဦးဆုံးနှင့်အတူ 160 ပြီးသားအမျိုးမျိုးသောက်ဘ်မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီကြီးမှလွှဲအပ်.
“အမှတ်တံဆိပ်၏အလွဲသုံးစားလုပ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းအဆချဲ့ထွင်,” Gurry ကပြောပါတယ်, domain name ကိုမှတ်ပုံတင်တဲ့စျေးပေါကြောင်းသတိပြု, စက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာကြာနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပဋိပက္ခရှိပါတယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးအော်တိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း.
ကနဦးရောနှောခုနှစ်တွင်, ဇန်နဝါရီလတွင်ဖွင့်လှစ်, လိပ်စာများကိုဂုရုအတွက်အဆုံးသတ်ကြသည်, စက်ဘီး, ဆိုရင် single, အဖြစ်ကောင်းစွာအဝတ်အစားအဖြစ်, ပိုင်ဆိုင်မှု, ပိုက်နှင့်လုပ်ငန်းများ.
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်တွင်အခြားယေဘုယျဝေါဟာရများ .football ပါဝင်, .လေယာဉ်ခရီးစဉ်, .ကတ်များနှင့် .bid.
ပထမဦးဆုံးအစဉ်သည် non-လက်တင်အက္ခရာ domains များလည်းအတည်ပြုပြီ, များအတွက်တရုတ်အပါအဝင် “ဂိမ်း”, အာရဗီများအတွက် “ဝဘ်” သို့မဟုတ် “Network ကို,” ဒါမှမဟုတ် Cyrillic များအတွက် “အွန်လိုင်း”.
– ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး '' စိုးရိမ်ကြောင်း’ –
“ဒီတော့ယူဆရ, အင်တာနက်ပေါ်ရှိသွားလာမှုစွမ်းရည်၏တိုးတက်မှုဆက်စပ်ချဲ့ထွင်ဘို့မိမိတို့အကြောင်းပြချက်. အဘယျသို့ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာနေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အတူသူတို့၏အပြန်အလှန်အဘို့အစားသုံးသူများကအသုံးပြုကြသည်အမှတ်တံဆိပ်စနစ်များအပေါ်ရှိကြောင်းသက်ရောက်မှုများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်,” သူကဆက်ပြောသည်.
cybersquatting အားဖြင့် aggrieved ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်တွေ — ဒိုမိန်းအမည်များ၏ကြမ်းတမ်းမှတ်ပုံတင်ရေး, တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူမှသူတို့ကိုနောက်ကျောရောင်းချသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အပြိုင်စားသုံးသူများရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် — WIPO ရဲ့ခုံသမာဓိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှလှည့်များ၏ option ရှိသည်.
တွင် 2013, 2,585 ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များ WIPO နှင့်အတူတင်သွင်းခဲ့ကြ, စံချိန်တင်ရည် 6,191 တစ်ဦးချင်းစီဒိုမိန်းအမည်များ.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလက်အောက်တွင်, Web ကိုမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီများ WIPO cybersquatting ကိစ္စများတွင်ရှုံးနိမျ့၏မှတ်ပုံတင်ကိုပယ်ရမယ်.
ကုလသမဂ္ဂကိုယ်ခန္ဓာပြီးသားအသစ်တစ်ခု gTLD ကိုရည်မှတ်သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမှုကြားနာသည်, ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်တင်သွင်းနှင့်နေဆဲ-မလှုပ်မရှားဝက်ဘ်ဆိုက် canyon.bike ၏ဒတျချြ registree ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ pitting.
Erik Wilbers, ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ် WIPO ရဲ့ခုံသမာဓိလက်မောင်းကို, gTLDs ၏ကျယ်ပြန့်ပွါးစေကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့ဆိုလိုလိမ့်မည်ဟုဆိုသည် “အများကြီးပိုပြီးအာရုံစိုက်” သူတို့စိန်ခေါ်ယျ.
“သင်တစ်ဦးတိုးချဲ့ domain name ကိုစနစ်တွင်လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းအရာအားလုံးကိုမှာရိုက်ကူးမထားနိုင်,” ဟုသူကပြောသည်.
20441	0 Cyber​​squatting, domain name ကို, Francis က Gurry, generic ထိပ်တန်းအဆင့်ဒိုမိန်း, ICANN, ယူနီဖောင်းဒိုမိန်း-အမည်အငြင်းပွားမှု-ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်လစီ, WIPO, ကမ္ဘာ့ဖလား Intellectual Property Organization မှ
← တိုက်ပွဲများလိမ်လည်မှုအဘို့အနယူး tool ကို ခရိုင်းယူကရိန်းထံမှလွတ်လပ်ရေးမိန့် →
ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းသတ်သေအန္တရာယ် Reduce ရနိုင်ပါသလား!
5 သင်၏အိပ်ခန်း Up ကိုအလှဆင်ရန်ရန်နည်းလမ်းများ
တောခွေး’ ညည်းတွားမြည်တမ်းကွန်ပျူတာအားဖြင့် ID'd နိုငျ
Apple ၏ရွှေကို iPhone 5S ကိုဆဲလန်ဒန်မြို့၌စီတန်းသည်ကိုထောက်သ
နယူး Execution ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနပြလာခြင်း 10 အမေရိကန်လူသတ်မှု Kill မိနစ်
Microsoft က Windows ကိုပူဇျောပါမညျ 10 အခမဲ့ဇူလိုင်လအတွက်
အမေဇုံ: Echo: ပထမဆုံး 13 ကြိုးစားပါမှအမှုအရာ
Nintendo ပြောင်းလဲမည်: အဘယျသို့ကျနော်တို့နယူး Console ကနေမျှော်လင့်နေ
Google Glass ကို – ပထမဦးစွာပြည်သူ့အဖမ်းခံရ
Black က & နှစ်ထပ် LST136 အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည့် String ညှပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကြက်တူရွေးဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားစမတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: သင့်ရဲ့ကားရဲ့ Dash ခုနှစ်တွင်အန်းဒရွိုက်?
10 အရေပြားများအတွက်ဆန့်ကျင်အောက်ဆိုဒ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းကျိုးများ, ဆံပင်နှင့်ကောင်းစွာ
8 ထိုအမှောင် Circles စေကြောင်းအကြောင်းရင်းများ
4 PDF File Format နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအရာများ
28 Mosambi ၏ Fantastic အကျိုးကျေးဇူးများ (Sugary အစားအစာ Lime) အရေပြားများအတွက်, ဆံပင်နှင့်ကောင်းစွာ
အောက်တိုဘာ 29, 2020
Nvidia က Shield ကို TV ကပြန်လည်သုံးသပ်: တောက်ပ AI အ upscaling နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Android တီဗီသေတ္တာ
ပင်လယ် 7, 2020
အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2019: iPhone ကို, OnePlus, Samsung နဲ့ Huawei ကနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆင့်
ဒီဇင်ဘာ 18, 2019
iPhone ကို 11 Pro ကိုမက်စပြန်လည်သုံးသပ်: မော်ကွန်းဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့် salvaged
အောက်တိုဘာ 9, 2019
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး5လက်ပေါ်
စက်တင်ဘာ 11, 2019
© 2020 မူပိုင်ခွင့် Newsrule.com
Pinterest အပေါ်ဒါဟာ pin